STAAD - abuuro xirmo naqshad kharash-ku-ool ah oo la hagaajiyay si looga hortago culeyska dhismaha - West India - Geofumadas
STAAD - Abuuritaanka xirmo naqshad kharash-ku-ool ah oo loo habeeyay si looga hortago culeyska dhismaha - Galbeedka Hindiya
Ogast, 2019 Engineering, tabo cusub, Microstation-Bentley
Waxay ku yaalliin meesha ugu hooseysa ee Sarabhai, K10 Grand waa dhismo xafiis xawaare ku shaqeeya kaasoo qeexaya heerar cusub oo loogu talagalay goobaha ganacsiga ee Vadodara, Gujarat, India. Aagga ayaa la kulmay koboc degdeg ah oo dhismeyaal ganacsi ah sababta oo ah u dhaw garoonka diyaaradaha iyo xarunta tareenka. K10 waxay shaqaaleysiisay La-taliyayaal VYOM oo ah la-taliyaha qaab-dhismeedka mashruuca waxayna u wakiishay inay qaabeeyaan dhisme kulminaya kana sarreeya rajooyinka ugu sarreeya ee ganacsiga Vadodara.
Mashruucan INR 1.2 bilyan ee mashruuca wuxuu ka kooban yahay sagxad hoose iyo dabaqyo xNUMX ah, oo leh isugeyn dhul ballac ah oo ah cago laba jibaaran 12. Inta badan dhismayaasha aagga ayaa ah adeegsiga isku dhafan, oo leh xafiisyo ka sareeya meheradaha kale. Si kastaba ha noqotee, K200,000 wuxuu rabay inuu keeno wax cusub oo aagga ah, sidaa darteed K10 Grand waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya xafiisyada. Qaab-dhismeedkani wuxuu xaddidi doonaa kala goynta xafiiska xafiiska ee deggeneyaasha.
Ka gudub dhibaatooyinka naqshadeynta si aad u abuurto meel bannaan khaanadda
Si loo qaabeeyo qaabkan xiisaha leh, VYOM waxay u baahneyd inay ka gudubto caqabado badan. Sababo la xiriira sare u qaadida iyo qorsheynta qaab dhismeedka gudaha ee dhismaha, waxaa jiray dhibaatooyin la xiriira qaabeynta qaab dhismeedka ay hay'addu u baahan tahay in wax laga qabto. Kooxda mashruuca waxay doonayeen inay abuuraan dhisme leh saddex munaarad iyo dhisme dhexe oo ku yaal bartamaha. Dhismuhu wuxuu u taagan yahay banaanka lixda dabaq ee hoose ka dibna wuxuu kor ugu soo baxayaa lixda dabaq ee sare. Abaabulka tiirarka iyo darbiyada goynta ayaa adkayd sababtoo ah qaabkan gaarka ah. Intaa waxaa u dheer, naqshadeeyaha iyo horumariyeyaha ayaa ku adkeystay inay galaan barta bilaa-baarka ah ee hoolka laga soo galo. Nuclearka udub dhexaadka ah wuxuu u baahnaa inuu dejiyo dhammaan howlaha guud, waana ay adkeyd in la helo naqshad dhulgariir u adkeysaneysa sababta qaab dhismeedka u soo jiidatay xoogag dambe oo dambe. Ugu dambeyntiina, saldhiga dhismuhu wuxuu ahaa isugeyn iyo sagxad, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in si taxaddar leh loo qiimeeyo dhismaha ka hor dhismaha. Waqtigan lagu jiro marxaladda dhismaha, dhismaha ayaa la filayaa inuu noqdo mid aaga u ah aagga.
Qaababka isku xirnaanta ee loogu talagalay qaabeyn dhaqaale oo dheeraad ah
Markii la naqshadaynayo dhismaha, qorshihii hore wuxuu ahaa in la sameeyo afar dhisme oo kala gaar ah: saddex munaarado iyo dhisme dhexe. Si kastaba ha noqotee, markii VYOM ay biloowday falanqaynta naqshadda gudaha STAAD, kooxda mashruuca waxay ogaadeen in soo-jeedintan naqshadeynta bilowga ahi aysan ahayn mid dhaqaale. Taabadalkeed, kooxdu waxay adeegsatay STAAD si ay u abuuraan naqshad cusub oo loo habeeyay si ay macaash badan u yeeshaan. Kooxda mashruuca waxay go’aansadeen inay isku xiraan dhammaan dhismayaasha, iyagoo badbaadiyey lacag iyo waqti. Waxay muhiim u ahayd kooxda inay sameyaan isbadalkan kahor wajiga dhismaha.
Iyada oo naqshaddan la rakibay, VYOM waxay go aansatay halka la dhigayo tiirarka taageerada qaab dhismeedka. STAAD waxay tusisay kooxda mashruuca in qaab dhismeedka uu si dhugdhug leh uga muuqdo dabaqa sagaalaad ilaa kor, taas oo ka dhigeysa tiirarka toosan ee toosan mid aan macquul aheyn maxaa yeelay waxay ka gudbi doonaan qorshaha dhismaha. Tiirarka ciribta ma aysan shaqeyn laheyn sababtoo ah waxay si weyn hoos ugu dhigi lahaayeen saqafka waxayna burburiyeen qorshooyinka xafiiska. Taabadalkeed, VYOM waxay soo jeedisay tiirar toosan sagxadda dabaq ee u horreeya iyo tiirarka qulqulaya laga soo bilaabo sagaalaad ilaa sagaalaad. Qorshahani wuxuu sii hayn doonaa dhismaha ilaa iyo inta uu ka dhex jiro shuruudaha Xeerka IS.
Hirgelinta guluusyada iyo tiirarka si loo sinnaado xiisadda
Muuqaal kale oo ka caawiyay VYOM abuurida booska gaarka ah waxay ahayd isticmaalka biibiile-kacsan-kadib. Alwaaxdu ma noqon karto mid qoto dheer, maxaa yeelay naqshadeeyuhu wuxuu rabay saqafka ugu sarreeya ee suurogalka ah. Intaa waxaa sii dheer, qorshuhu wuxuu rabay in tuubooyinka ay maraan laamiga. Alwaaxyadan, oo ay ka mid yihiin tiirar iyo derbiyada goynaya, waxay ka hortageen gumaadka dhismaha, taasoo u oggolaaneysa bartamaha xargaha iyo adkeynta inay daris yihiin. VYOM waxay habeysay tiirarka si ciidanka dambe ay ugu wada nagaadaan bartamaha dhismaha. Dhamaan derbiyada goynta, darbiyada kor u qaadida iyo tiirarka waxaa loo habeeyay si ay u adkeysan karaan 70% ee xoogga dambe. Si loo bixiyo meel bannaan oo aan madhanayn oo ku dhex taal goobta lagu ordo, VYOM waxay isticmaashay laambado iyo alwaaxyo jiifa oo cagaha 20 ah inta hartay dhismayaasha kale.
Iyada oo la adeegsanayo STAAD, VYOM waxay ogaatay in wali dhismaha ku yaal aag aad u sareeya. Goobtani waxay ka dhacday dabaqa sagaalaad sababtoo ah kala dheereynta tiirarka kala-saaridda. Dabaqa sagaalaad wuxuu wataa xamuul weyn, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in la hagaajiyo naqshadda. Markii kooxda mashruucu xaqiiqsadeen xaaladdan, xubnaha kooxdu waxay ku guuleysteen inay ka dhaqaaqaan jihada jihada sagxadda sagaalaad iyagoo xoojinta iyo fiilooyinka la dul dhigayo isla weelka.
Kaydinta waqtiga naqshada goobta shaqada ee mustaqbalka
Adigoo adeegsanaya STAAD, VYOM waxay dhammeystirtay naqshaddii dhismaha oo ay ku qaadatay sawiro bil gudaheed. STAAD waxay badbaadisay kooxda mashruuca waqti aad u badan inta lagu gudajiray marxaladda naqshadeynta, taas oo u oggolaatay ku dhawaad ​​isugeynta naqshadeynta 70 labada qaab ee naqshadeynta iyo naqshadeynta ugu dambeysa bisha dhexdeeda. STAAD waxay yareysey waqtigii loo baahnaa naqshadeynta iyo falanqaynta isugeyntaas. Codsiga ayaa sidoo kale u oggolaaday farqiyahan iyo isbeddelada qaabeynta inay u hoggaansamaan koodhka IS ee jawiga si fudud loo isticmaali karo.
Naqshadeeyayaashu waxay buuxiyeen dhammaan shuruudaha naqshadeeyaha iyo horumariye, iyadoo dhismaha hadda uu socdo. Dhismaha muddada dheer la sugayay wuxuu umuuqdaa mid la mid ah nooca '3D', iyo goobaha ganacsiga ayaa faa iido u leh carqalad la'aan. Isagoo ku sugan bartamaha magaalada, K10 Grand wuxuu u oggolaanayaa deggeneyaasha inay heystaan ​​wax walba oo ay ugu baahan yihiin meel u dhow, oo ay ku jiraan xarumaha wax laga iibsado, isbitaallada, suuqyada waaweyn iyo maqaayadaha. Booska waxaa ka mid noqon doona saqaf dusha sare ah, goobo kulan oo la wadaago, barxad, goob jimicsi iyo kafateeriya, oo ka dhigi doona goobta shaqada mustaqbalka.
Mashruuca cusub ee 'K10 Grand' ayaa loo xushay inuu yahay kama-dambayste sanadka 2018 ee Barnaamijka Abaalmarinta Kaabayaasha ee qaybta “Dhismooyinka Injineerka”.
Iyaga oo sii qaatay dhaxalka, sanadkan, ururada soo socda waxay gaareen liistada finalka sanadka ee barnaamijka Abaalmarinta Kaabayaasha 2019 qeybta "Injineerka Dhismaha".
FG Consultoria Empresarial ee xarunta cusub ee Patrimonium, oo lagu fuliyay 100% naqshada qaab dhismeedka BIM, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brazil
Sterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd. Wixii Dhirubhai Ambani International Convention & Exhibition Center, Mumbai, Maharashtra, India
WSP ee soo gudbinta nashqadeynta ku habboon ee salka qotodheer ee hoosta ka xariiqa sumadda Admiralty Arch, London, UK
Waxaa qoray Shimonti Paul
Post Previous" Hore Sida loo kiciyo dhismayaasha 3D gudaha Google Earth
Post Next Majiraan meelo indhoole oo dheeri ah oo leh howlaha MosaicNext »